यस्ता छन् हर्मोनको गडबडीले हुने रोग र अनौठा समस्या हर्मोनको गडबडीले महिलामा जुँगा आउनेदेखी बच्चा नहुनेसम्म हुन्छ। पुरुषमा पनि स्तन बढ्नेदेखी लिङ्ग वा अन्डकोष सानो हुने समस्या देखापर्छ। सोमबार, फागुन ३०, २०७८
गर्भवतीलाई तलतल लाग्नुको कारण के होला? किन के खाऊँ, के खाऊँ हुन्छ? हामी सबैले गर्भधारण गरेका महिलाका व्यवहारबारे विभिन्न किंवदन्ती सुनेका छौँ। जस्तै - केही महिलालाई आइसक्रीम र अचार मात्र खान मन लाग्छ, कोही मध्यरातमा पतिलाई कुखुराको भुटन ल्याइदिन भन्छन् भने कसैलाई एउटा विशेष ब्र्यान्डको चकलेट दिनमा पाँच पटक खानुपर्छ। शनिबार, फागुन २८, २०७८
मिर्गौला पत्थरी भएकाले के खाने, के नखाने? मिर्गौलामा हुने पत्थरी (स्टोन) लाई मेडिकल भाषामा रेनल क्याल्कुलाई भनिन्छ। हिजोआज जीवनशैली र खानपानका कारण मिर्गौलामा पत्थरी हुनेको संख्या बढ्दो छ। पत्थरी विभिन्न कसिमका हुन्छन् र यो विभिन्न कारणले हुने गर्छ। बिहीबार, फागुन २६, २०७८
कामकाजी महिलाका लागि ७ स्वास्थ्य टिप्स –दिनहुँ व्यायाम गर्न सकिएन भने पनि कम्तीमा हप्ताको तीन दिन व्यायामका लागि समय निकाल्ने । मंगलबार, फागुन २४, २०७८
ढाड दुख्ने समस्या छ? निको पार्न यसो गर्नुस् कयौं घण्टासम्म एकैस्थानमा बसेर काम गर्दा पिठको मांसपेशी कमजोर हुन थाल्छ। यस्ता मांसपेशीमा लामो समयसम्म कुनै गतिविधि आउँदैंन र यसको लचिलोपनामा असर पर्न थाल्छ। सोमबार, फागुन २३, २०७८
'यी चारथरी सपना मानिसले भुल्न सक्दैनन्' बलुके जसै युवावस्थामा प्रवेश गरिन्, उनलाई बारम्बार केही सपना दोहोरिन थाल्यो। आखिर किन यस्तो हुन्छ भनेर शोध गर्न तिनै दोहोरिइरहने सपनाले प्रेरित गरे। आइतबार, फागुन २२, २०७८
हरेक दिन हलुका उफ्रिनुहोस्, हड्डी बलियो बन्छ शरीर स्वस्थ राख्न हामी नियमित व्यायाम गर्छौ, दौडन्छौँ, हिँड्छौँ। जुन निकै राम्रो हो। एउटा अध्ययनले दैनिक कम्तीमा दुई मिनेटसम्म हलुका उफ्रँदा हड्डी बलियो बन्ने र भाँचिने खतरा कम हुने देखाएको छ। आइतबार, फागुन २२, २०७८
यस्ता छन् हृदयाघातका ९ लक्षण छातीको दुखाइ धेरैजसो चर्को हुन्छ तर केही मानिसहरूमा त्यो दुखाइको मात्रा अपच भएका बेला जस्तो अलि कम महसुस हुन सक्छ, महिला र पुरुष दुवैमा हृदयाघातको सबभन्दा प्रमुख लक्षण छाती दुख्नु हो। शनिबार, फागुन २१, २०७८
कार्यस्थलमा डिप्रेसन: जान्नुहोस् यसको कारण र बच्ने उपाय विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार नकारात्मक कार्यस्थल वातावरणले मानिसको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यलाई बिगार्छ। यसले गर्दा कार्यालयमा अनुपस्थिति बढ्ने र कर्मचारीको उत्पादकत्व कम हुन सक्छ। शुक्रबार, फागुन २०, २०७८
चाँडो रिसाउनु हुन्छ? यस्ता छन् रिस नियन्त्रण गर्ने ९ प्रभावकारी उपाय रिसले व्यावसायिक जीवनमा नै आँच आउनछ। यदि तपाईलाई रिस नियन्त्रण गर्न गा–हो भइरहेको छ भने तल उल्लेखित केही टिप्स पालना गर्न सक्नुहुन्छ : मंगलबार, फागुन १७, २०७८
दुर्लभ रोग सम्बन्धी २३ जानकारी २८ फेब्रुवरीका दिन विश्वभर दुर्लभ रोग दिवस अर्थात 'रेयर डिजिज डे' मनाउने गरिन्छ। यसै क्रममा दुर्लभ रोगको साथमा जीवन बाँचिरहेकाहरुको जीवनलाई आधार मानेर तयार पारिएको केही तथ्यहरु यस प्रकार रहेका छन्। सोमबार, फागुन १६, २०७८
महिलाको जीवनमा आउने यी तीन चरण, जो स्तन क्यान्सर बारे बुझ्न महत्वपूर्ण मानिन्छ अब महिलालाई हुने स्तन क्यान्सरको चर्चा गरौं। यो रोग के हो र यसबारे के–कस्ता विषय पत्ता लागेका छन् भन्ने जानकारी तलका प्रश्न र जवाफको माध्यमबाट बुझौं। आइतबार, फागुन १५, २०७८
सुत्नुअघि के खाने, के नखाने? निद्राको कमीले हामीलाई धेरै गम्भीर रोगहरूको जोखिममा पार्न सक्छ। हाम्रो खानपानले हाम्रो निद्रामा पनि असर गर्छ। हामी दिनहुँ यस्ता धेरै खानेकुरा खान्छौं, जसले हामीलाई निद्रा नलाग्ने समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। शनिबार, फागुन १४, २०७८
मौसमी डिप्रेसन: कारण, लक्षण र बच्ने उपाय मौसमी डिप्रेसन ऋतुहरुसँगै आउँछ र जान्छ। सामान्यतया यसको लक्षण जाडो मौसममा देखापर्छ र गर्मीको समयमा गायब हुन्छ, तर धेरै अवस्थामा यो उल्टो पनि हुन सक्छ। शुक्रबार, फागुन १३, २०७८
आँखाको सुरक्षामा ध्यान दिइएन भने लाग्न सक्ने ४ रोग आँखाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। यदि समयमा नै ध्यान दिइएन भने आँखामा विभिन्न रोग तथा समस्या देखिनसक्छ। बुधबार, फागुन ११, २०७८
खानेबित्तिकै पेट दुख्ने १० कारण र रोकथामका १० उपाय पेटको दुखाइ जटिल रोगको संकेत पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। पेट दुख्नुका धेरै कारण हुन्छन्। कसैकसैमा पेटकै रोगका कारण पेट दुखेको हुन सक्छ भने केहीमा खानपिनमा हुने गडबडीका कारण पेट दुख्छ। बुधबार, फागुन ११, २०७८
हर्टअट्याक हुने ८ कारण र जोगिने १५ तरिका हर्टअट्याक (ह्दयाघात) अकस्मात हुने मुटुको रोग हो। त्यसैले हर्टअट्याक हुने लक्ष्यणहरु पनि अचानक सुरु हुन्छ। छातीको बिच भागमा वा बायाँतिर दुख्ने वा पोलेको जस्तो अनुभव हुने, छातीमा दबाव भएको महसुस हुने, छाती हल्का दुखी राख्ने। मंगलबार, फागुन १०, २०७८
लो ब्लडप्रेसर: लक्षण र समाधानका उपाय शरीरमा पानीको कमी हुन नदिनुहोस्। निर्जलीकरणले रक्तचाप पनि कम गर्छ। दिनमा कम्तीमा ७-८ गिलास पानी पिउनु जरुरी छ। आइतबार, फागुन ८, २०७८
छालाको सुन्दरता बिगार्ने ४ बानी तातो पानीले धेरै बेर नुहायो भने छालामा हुने फ्याट्टी एसिड, सेरामाइड्सजस्ता तत्व नष्ट हुन्छ र यसले छालालाई रुखो, सुका र फुस्रो बनाउँछ। त्यसैले तातो पानीले १० अथवा १५ मिनेटभन्दा बढी नुहाउनु हुँदैन। आइतबार, फागुन ८, २०७८
बच्चाको आँखा कमजोर भएको कसरी थाहा पाउने? यी हुन् ९ संकेत बच्चाले आफूलाई आँखामा समस्या भएको बताउन सक्दैनन्। किनभने उसले थाहै पाउँदैन। तर, अभिभावकले उसको हाउभाउ र क्रियाकलाप हेरेर आँखामा समस्या आएको थाहा पाउनुपर्छ। कसरी थाहा पाउने? आइतबार, फागुन ८, २०७८
यी हुन् मिर्गौला पत्थरी भएकाहरुले खान नहुने ९ र खाँदा फाइदा हुने ११ खाना मिर्गौलामा हुने पत्थरी (स्टोन) लाई मेडिकल भाषामा रेनल क्याल्कुलाई भनिन्छ। हिजोआज जीवनशैली र खानपानका कारण मिर्गौलामा पत्थरी हुनेको संख्या बढ्दो छ। पत्थरी विभिन्न कसिमका हुन्छन् र यो विभिन्न कारणले हुने गर्छ। शनिबार, फागुन ७, २०७८
कुन उमेरमा कति घण्टा सुत्ने? हामीहरु प्रायले आफूलाई पर्याप्त निद्रा नपुगेको सहजै थाहा पाउछौं। तर पर्याप्त निद्रा भनको कति हो त? अमेरिकाको नेशनल स्लीप फाउण्डेशनले गरेको एक अनुसन्धानले भनेको छ – त्यो तपाईंको उमेरमा भर पर्छ। शुक्रबार, फागुन ६, २०७८
बालबालिकामा हुने क्यान्सर कसरी पत्ता लगाउने? समयमै पत्त लगाएर उपचार गरे ९० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकामा हुने क्यान्सर निको हुन्छ। बालबालिकामा हुने क्यान्सरको उपचार सरकारी अस्पतालहरुमा सहुलियतसहित कम खर्चमा उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको चिकित्सकहरु बताउँछन्। मंगलबार, फागुन ३, २०७८
स्वस्थ जीवनशैलीका ९ सुत्र स्वस्थ जीवनशैलीले प्राकृतिक रुपमा नै उच्च तहको उर्जा प्रदान गर्छ र फूर्तिलो बनाउँछ। यसैले स्वास्थ्यका लागि आफ्नो दैनिक जीवनशैली परिवर्तन गर्न कहिल्यै पनि ढिलाई गर्नु हुँदैन। स्वस्थ जीवनशैलीका केही आधारहरु यी हुन्: शनिबार, माघ २९, २०७८
मुखको क्यान्सरका ६ कारण, १० लक्षण र रोकथामका ८ उपाय मुखमा भएका परिवर्तन, घाउ, खटिरा, दाग सजिलैसँग निदान गर्न सकिन्छ। त्यसैले सजिलै मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निम्न उपायहरु अपनाऔं: शुक्रबार, माघ २८, २०७८
बच्चाले सास फेर्ने क्रममा घ्यारघ्यार गर्छ? उपचार के हो? धेरै सानो बच्चामा नाक बन्द भएर सुनिने आवाज बाहेक यसरी सुनिने आवाजलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। श्वास भित्र लिँदा सुनिने आवाजलाई ‘स्ट्राइडर’ भनिन्छ भने बाहिर फाल्दा सुनिने आवाजलाई ‘हिवज’ भनिन्छ। बुधबार, माघ २६, २०७८
अनि हुन्छ शरीर र मनको शुद्धि अनि निन्द्राको लागि रात्रीको जुन ध्यान छ, त्यस पछि निंदाउन। शरीर यसरी शुद्ध हुनेछ र शरीर शुद्ध भयो भने शरीरको शुद्धि पनि आफैंमा एउटा अदभूत आनन्द हो। अनि त्यो आनन्दमा अझै झन अन्तस: प्रवेश हुन्छ। शनिबार, माघ १५, २०७८
यसकारण चिसोमा भाइरसजन्य संक्रमणको जोखिम बढी अर्को पक्ष भनेको चिसो मौसममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि घट्ने गर्छ। डा बाँस्तोलाका अनुसार चिसो मौसम यसै पनि मुटु रोगी र दमका रोगीका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ। त्यहीमाथि कोरोना भाइरसले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने उनले बताए। शनिबार, माघ ८, २०७८
यस्ता छन् ओमिक्रोन संक्रमितमा देखिन सक्ने २० लक्षण ओमिक्रोन भेरियन्टले मानिसमा बढी हाच्छ्युँ आउने, हल्का ज्वरो आउने, धेरै रुघा लाग्ने जस्तो लक्षण देखिने गर्दछ। घाँटी खसखस हुने, चिलाउने र श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने जस्ता लक्षण पनि देखिएका छन्। बुधबार, माघ ५, २०७८
के हो किटो डाइट? के यसले तौल नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्छ? सबैका लागि प्रभावकारी छ? अमेरिका, यूरोप जस्ता पश्चिमा देशहरूमा मासुजन्य चिज तथा उच्च बोसोयुक्त खानाको उपभोग बढी हुन्छ। त्यस्ता राष्ट्रहरुमा यो किटो डाइट पालना गर्न सजिलो अनि प्रभावकारी पनि हुन्छ। तर नेपाल लगायत अन्य एशियाली राष्ट्रहरु जहाँ मुख्य खाना नै कार्बोहाइड्रेट अर्थात अन्न (चामल वा रोटी) पर्छ त्यहाँ यो डाइट प्लान त्यति उचित देखिँदैन। शनिबार, माघ १, २०७८